4 Asbaabood, sababta hablaha boqolkiiba inta siigaysata kaga yar yihiin wiilasha? | Gaaloos.com
Home » siigada » 4 Asbaabood, sababta hablaha boqolkiiba inta siigaysata kaga yar yihiin wiilasha?
4 Asbaabood, sababta hablaha boqolkiiba inta siigaysata kaga yar yihiin wiilasha?
Cimi baaris la sameyay Amerika ayaa waxay sheegeysaa in 60% habluhu qirteen iney sameeyaan siigada, halka raga siigaysta ay gaarayaan 85%.
Cilmi baarista waxaa lagu sheegay in 30% dumarka da'dooda ka hooseysa 30 sano jirka sameeyaan siigada isbuuci mar, halka 10% sameeyaan maalin walba. Celcelis ahaan dumarka waxay ku bilaabaan siigada 14 ama 15 sano.
Aniga shaqsi ahaan shaki weyn baan ka qabaa in hablaha Soomaaliyeed ama badankood ay Siigaysi garanayaan, waxanan taa sabab uga dhigayaa gudniinka fircooniga ah.
Maxay dumarka boqolkiiba inta siigaysataa kaga yar yihiin wiilasha?
1- Shahwada oo aan hablaha u gubin sida ay wiilasha u gubto.
2- Xubnahooda taranka oo ku jira meel qarsoon, dhifna ay tahay inay la kulmaan wax taataabta oo kiciya dareenkooda, iyada oo lawada ogsoonyahay in kacsigu uu yahay sababta tooska ah ee keenta seegaysiga.
3- Iyaga oo aanu dhibaato ku hayn isku biyabbax habeen, kol haddaanay aqoon riyo habeen oo gaarsiisa heer biyabbax, waase haddii aan la istiimin intaanay seexan kahor.
4- Rabitaanka jinsiyeed ee raggu waxa uu ku kooban yahay xubnaha taranka, oo kolka uu kacsadaba waxa uu doonayaa inuu galmo sameeyo, ha yeeshee rabitaanka dumarku waxa uu isugu jiraa mid xubin taran iyo mid nafsiyadeed. Waxa ay habluhu helaan raaxooyin kale oo ay kaga maarmaan tan biyabbaxa sida; jacaylka, akhrinta sheekooyinka iyo riwaayadaha jacayl, xafladaha, shineemooyinka, jimicsiga, daryeelka jirkooda, qoob-ka-cayaarka, iwm.
Title: 4 Asbaabood, sababta hablaha boqolkiiba inta siigaysata kaga yar yihiin wiilasha?